सडक छेकेर ‘फुड फेस्टिभल’ ! - Enepalese.com
सडक छेकेर ‘फुड फेस्टिभल’ !
इनेप्लिज २०७३ वैशाख ७ गते ११:३० मा प्रकाशित
झापा, ७ बैशाख । व्यस्त सडकको छेउमा सवारीसाधन ५ मिनेटमात्रै पार्किङ गर्दा त्यसको परिणाम के भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई राम्ररी थाहा छ । तर, शुक्रबार झापाको शनिश्चरे रोडस्थित बीच सडकमा दिनभर मेला लगाइयो । प्रशासन रमिते बन्यो ।
‘रुस्लान भोड्का म्युजिक एण्ड फुड फेस्टिभल- २०७३’ पोजिटिभ मिडिया इभेन्ट्स नामक संस्थाले आयोजना गरेको हो । अचम्मको कुरा के छ भने जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै यस मेलाका लागि अनुमति दियो । मेलालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न प्रहरी प्रशासनलाई पत्रसमेत काट्यो ।
मेला आयोजकले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडलाई निम्तो नै पठाएको थियो । प्रशासन कार्यालयले समेत इप्रका बिर्तामोड र ट्राफिक कार्यालयलाई पत्रको बोधार्थ दिएको थियो । पत्रमा इलाका प्रहरीलाई मेलामा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न भनिएको थियो, ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न ।
पत्रमा प्रशासन कार्यालयका एकजना प्रशासकीय अधिकृतले रातो मसीले सही गरेका छन् । मेला बिर्तामोडको शनिश्चरेरोडमा शुक्रबार विहान ११ बजेदेखि राति अबेरसम्मै लगाइयो । यो समय अत्यन्तै व्यस्त र व्यावसायिक तथा कार्यालय प्रयोजनका हिसाबले सो सडक भिडभाड रहने गर्दछ ।
यसबारेमा बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सहायक प्रजिअ डम्बरुप्रसाद निरौलाले फोन उठाए । ठाडो शैलीमा जवाफ फर्काएका उनले आफ्नो नाम समेत बताउन चाहेनन् । दुईजना सांसदले नै मेला लगाउनका लागि अनुमति मागेको उनले खुलासा गरे । उनले सांसदको नाम भने भनेनन् । सडक पूरै अवरोध नगर्नु भन्दै अनुमति दिइएको उनले स्वीकारे ।
बुझिएअनुसार सहायक प्रजिअ निरौलाले तुरुन्तै जिल्लाका डीएसपी भीम दाहाललाई फोन गरेर सल्लाह मागेका थिए । तर, डीएसपी दाहालले मेला सुरु भइसकेकाले हटाउन नसकिने बताएको स्रोतको दावी छ ।
सडक अवरुद्ध भएकाले भरिभराउ थियो । मानिसलाई आवत-जावत गर्न कठिनाई भइरहेको थियो । त्यस सडकमार्फत कुनै पनि सवारीका साधन पार गर्न सकिरहेका थिएनन् । सडक भरी हो-हल्ला र अव्यवस्थित दृश्य मात्र देखिन्थ्यो । प्रहरी भने सडक मेलालाई मजाले सघाइरहेको थियो ।
‘सिडियो कार्यालयले नै स्वीकृती दिइसकेपछि हामीले केही गर्न मिल्दैन,’ एक प्रहरीले भने । तर, मेलाको आयोजकले सडक अवरोध गर्दा समेत प्रहरीले केही गर्न सकेन । मेला आयोजकले बाटो छेकेरै सवारी साधनलाई शाखा सडकबाट पठाइरहेको थियो ।
‘सडक किनारमा सागपात बेच्नेलाई समेत लखेट्ने ट्राफिक प्रहरी नै आज यस मेलाको दर्शक र समर्थक बनेका छन्,’ एक सर्वसाधारणले भने, ‘काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तै भएको छ, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेको यही हो ।’ मेलामा इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी खड्कबहादुर खत्री आफैँ खटिएका थिए । प्रहरी दर्शक बनेका थिए ।
मेलामा विभिन्न ब्याण्ड र कलाकारको प्रस्तुति थियो । बच्चाहरुको खेल हाउजी, घम्साघम्सी, खानाका परिकारहरु राखिने कुरा आयोजकका सदस्यले अघिल्लै दिनदेखि फेसबुकमा लेखेका थिए । सडक मेलाको प्रचार गर्दै दुई दिनसम्म बिर्तामोडमा माइकिङसमेत गरिएको थियो । मेलाप्रति आक्रोश पोख्दै बिर्तामोडका सर्वसाधारणले फेसबुकमा स्टाटस समेत लेखेका छन् ।
यस्तो छ स्टाटस-
‘बाटोको साइडमा सवारीसाधन रोक्दा नो पार्किङमा किन रोकेको भनी जरिवाना गर्न खोज्ने ट्राफिक प्रहरीबीच सडकमा सवारी आवतजावतमा असर गर्ने गरी कार्यक्रम गर्दा किन मुकदर्शक ?’ — राजु गौतम
‘सडकको बीचमा रक्सिको विज्ञापन ! झापा प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, अधिकारवादीहरु कहाँ छौ ???’ बिर्तामोड-शनिश्चरेरोडको बीचमा रुस्लान भोड्काको विज्ञापन ! यतायत पुरै ठप्प ।’ — मीनप्रकाश उप्रेती